HADHWANAAG ABAAL MARIN AYAY MUDNAYD EE XAYIRAAD MA MUDNA, BALSE HORYAALTV AYAA EDBIN U BAAHNA. - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
HADHWANAAG ABAAL MARIN AYAY MUDNAYD EE XAYIRAAD MA MUDNA, BALSE HORYAALTV AYAA EDBIN U BAAHNA.
September 4, 2019 2:55 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
Hadhwanaag waa wargaysa ugu sumcada iyo sharafta badan uguna wayn websiteska somaliland ama somalia oo dhanba.
Waa website warar tafatiran oo aan been ahayn bulshada u baahiya.
Hadhwanaag isagoo waajibaadkiisi shaqo iyo masuuliyadii uu u umada u hayay ka duulaya, waxaa uu ogaaday musuq maasuq uu ku kacay gudoomiyaha bangiga dhexe.
Maxkamada gobolka waxaa loo keenyay codsi uga yimid policeka iyo warqad qalin ku malmaluuqan oo aan official ba ahayn oo ka socota x,xeer ilaalinta, oo ay ku codsanayaan in la xayiro websiteka inta dacwadu socoto.
Mida lala yaabay ee aan caqliga galayn ayaa ah in maxkadu ku xayirto websiteka codsi daraf ka yimid, iyada oo aan dacwadiiba galin oo aan ogaanin in warka uu websiteku baahiyay sax yahay iyo in kale, oo xataa aan la ogaysiin websiteka.
Hadhwanaag waxay xaq u lahayd in hadii lasoo dacweeyay in la ogaysiiyo oo ay jawaab celin kasoo samayso eedahaa loo soo jeediyay, oo maxkamada horjeedaa iska difaacdo cadaymaha ay isku difaacaysana ay soo diyaariso.
Kadib maxkamadu hadii ay ku hesho eedaha websiteka lagu soo oogay xaq ayay u leedahay in markaa xayirto amaba ay talaabada ku haboon ee ciqaabeed ka qaado.
Balse Tani waxay u egtahay xad gudub sharciyeed oo loola badheedhay hadhwanaag oo lagu leeyahay xaq uma lihid in aad xukuumada wax ka sheego, ama ma baahin kartid musuqa iyo xumaanta aan ku kacno.
Horyaal TV doraad ayuu maahiyay muuqaal ka cadhaysiiyay bulshada inteeda badan oo gabi ahaanba ka baxsan akhlaaqda saxaafada iyo tan wariyeba.
Dad uu dumar ku sheegayo oo marfashyo fadhiya oo codkooda la badlay wajigoodana la qariyay oo qaad ama jaad cunaya oo leh waan ku faraxsanahay oo habi ayaanu ku nahay balwada ayuu baahiyey.
Muuqaalkaasi waxa uu u ekaa mid lagu dhiiri galinayo xumaanta oo hablaha lagu tusayo in ay caadi iska tahay in ay qayilaan oo aanay ceeb ahayn.
Dhanka kale waxay ahayd sumcad dil iyo fadheexad lagu la kacay dumarka somaaliyeed dhamaan khaas ahaana kuwo hargaysa ku dhaqan.
Bulshada somaliland dhamaanteed waxay sugaysay in xukuumadu ay talaabo ka qaado tvga horyaal, balse ma dhicin ee bedelkeeda waxaa la xayiray websitekii ugu sumcada badnaa dalka iyo bulshada dhexdeeda, waxaana loo xidhay arin mudnayd in abaal marin lagu siiyo oo ah MUSUQMAASUQ uu bulshada u soo bandhigay.
Xukuumada xaqiiqada ka xanaaaqda xumaantana taageerta.